Gabo An’ny Olona Rehetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2014 18:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, বাংলা, русский, Français, 日本語, polski, Español
Tsy iadian-kevitra ny fahoriana manototra ny literatiora. Gabriel García Márquez, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Gabo, no mpisava làlana tamin'ny antsona hoe “tena izy mahagaga” ary na dia momba ny fitiavana aza ny sasany tamin'ny asany, ny fientanentany sy ireo tantara sasany mahafinaritra mikasika ny tanàna nahaterahany, Aracataca, dia nahazo mpanjohy na dia tany amin'ny toerana lavitra toa an'i Shina sy Iran aza.
Nanohina ireo Amerikana mpanaraka akaiky ny asany ny fahafatesany. Lasa lavitra tokoa ny asany ka na dia ilay olo-malaza Oprah Winfrey aza nampiditra ny “Fitiavana amin'ny Fotoanan'ny kolerà” tao amin'ny fikambanana mpamaky boky voafantina ary nametraka io ho “iray amin'ireo tantaram-pitiavana lehibe indrindra novakiako.
maty i #GabrielGarciaMarquez, 87 taona. Mety mpanoratra lehibe indrindra izao androntsika izao, mety ho anisan'ny lehibe indrindra hatrizay mihitsy.